Anyone needs WEB SITE ???????? Let me know…….. | MyanmarReferral
← Q and A November 2011 (1)
Pregnancy and Air Travel ကိုယ်ဝန်နဲ့ လေယာဉ်ခရီး →
Anyone needs WEB SITE ???????? Let me know……..
December 9, 2011Posted by lathaphotoke	Send me an email if you want to get Web Site for your personal or organization or your business..
email : myanmarreferral.com@gmail.com
This entry was posted in Advertise Your Service. Bookmark the permalink.
အဖြူရောင်သံစဉ်နားဆင်ရန်	BBC Broadcast (တိုက်ရိုက်နားဆင်ရန်)Wednesday Morning:Monday Morning:Monday Morning:Sunday Morning: RFA Broadcast (တိုက်ရိုက်နားဆင်ရန်)အာရ်အက်ဖ်အေ နေ့စဉ် အသံလွှင့် အစီအစဉ် 2013-05-23 01:29အာရ်အက်ဖ်အေ နေ့စဉ် အသံလွှင့် အစီအစဉ် 2013-05-22 17:29အာရ်အက်ဖ်အေ နေ့စဉ် အသံလွှင့် အစီအစဉ် 2013-05-22 14:29DVB TV broadcast	28042013 Asia News and Asia View	National League for Democracy TV	PC-PolishFM-1	Archives	Select Month March 2012 (1)
MYANMAR CALENDAR	မဲဇလီဟင်းချို
ပါဝင်ပစ္စည်းများ မဲဇလီရွက် မနုမရင့် – အနည်းငယ်
ငါးရံ့ အနေတော် – တစ်ကောင်
ခရမ်းသီး – အရွယ်တော်တစ်လုံး
ခရမ်းချဉ်သီး – နှစ်လုံး
ဆန်လှော်မှုန့် – အနည်းငယ်
ပထမဆုံး မဲဇလီရွက်ကို အခါးထွက်အောင် နှစ်ရေလောက် ပြုတ်ပေးရပါမယ်။ ငါးရံ့ကို လည်း ပြုတ်ပြီး အသားနွှင်ထားပါ။ ခရမ်းသီးကိုတော့ အလုံးလိုက် မီးဖုတ်ပြီး ပါးပါးလှီး ပါမယ်။ ခရမ်းချဉ်သီး နှစ်လုံးကိုလည်း ပါးပါးလှီးပါမယ်။ ကြက်သွန်ဖြူနီကိုလည်း ဆီသတ် ထားရပါမယ်။
လိုသလောက်အနေတော် ရေထည့်ထားတဲ့ ရေအိုးဆူပွက်လာအောင် တည်ထားပေးပါ။ ရေဆူလာပြီဆိုရင် အရိုးနွှင်ထားတဲ့ ငါးအသား၊ ခရမ်းသီး၊ ခရမ်းချဉ်သီးနဲ့ ဆန်လှော်မှုန့် အနည်းငယ်ထည့်လိုက်ပါမယ်။ အရသာအပေ့ါအငန်အနေတော်ဖြစ်အောင် ထည့်ပါ။ နည်းနည်းမွှေပေးပြီး အရသာထွက်လာအောင် ခဏလောက်အုပ်ထားပါ။ အဲလိုခဏ အုပ်ထားပြီးမှ မဲဇလီရွက်ပြုတ်တွေကို ထည့်ပါမယ်။ အရွက်ထည့်ပြီး အပြစ်အကျဲ အနေတော်လည်း [...] Read More ယနေ့ ကြွလာမိတ်သဟာများ	www.sportwettenmeister.com
Top ArticlesMyanmarCelebrity	Celebrities @ NITIPON Beauty Center Opening	MTV	Ninja - Chit Thu Wai	VOA Burmese TV	Burmese TV Update 05-21-2013	>